AirTag, kani wuxuu noqon doonaa magaca qalabka aaladda Apple | Wararka IPhone
AirTag, tani waxay noqon doontaa magaca qalabka aaladda Apple
Luis Padilla | | Qalabka IPhone, Noticias
Waxaan wali sugeynaa calaamad rasmi ah oo ku saabsan aaladaha cusub ee Apple tracker, kuwa ka faa'iideysan doona U chip! taasina waxay noo saamaxaysaa inaan helno shay kasta oo aan ku darnay. Laakiin waxa aan hayno waa xogo yar iyo warar xan ah oo iyaga ku saabsan, hadana waxay umuuqataa Waxaan helnay magaca qalabkan mustaqbalka ee la filayo maalmaha soo socda, toddobaadyo markiiba: AirTag.
Tan waxaa lagu muujiyay koodhka dhawaanta la soo saaray ee iOS 13.2, oo ah nooca ugu dambeeya ee loo heli karo iPhone, halkaas oo Guilherme wuxuu ku helay magacan nidaamka feylasha qarsoon ee nidaamka. Magaca ka sokoow, wuxuu helay faahfaahin kale oo xiiso leh oo aan hoos kuugu soo sheegi doono.
Waxaan ka hadlaynay aaladda Apple waxa loogu yeero aaladda gudaha toddobaadyo, illaa iyo hadda waxaan isticmaalnay magacyo sida AppleTag, laakiin waxay umuuqataa in magaca rasmiga ah uu ku dambeyn doono sidii AirTag. Magacaas ka sokow, sidoo kale waan ognahay taas waxaa ku jiri kara batari la beddeli karo, maadaama nidaamka isla faylka ah aad ka heli karto waxa noqon lahaa animation-ka kaas oo lagu tilmaami lahaa inay lagama maarmaan tahay in la beddelo batariga qalabka. Tani waa war aad u wanaagsan maxaa yeelay waxay hubin doontaa nolol aalad ka dheer sidii ay ahaan lahayd baytariga go'an, sida ay tahay qalabka qaar hadda socda.
Wax fikrad ah kama hayno goorta aan arki karno qalabkan cusub. Maalintii shalay kadib Apple waxay soo saartay AirPods Pro cusub iyadoon wax ogeysiis ah horey loo sii shaacin, inbadan oo naga mid ah ayaa fileynay in maanta ay sii socon doonto layaab iyo in aan arki karno qalabkan cusub oo horeyba loo iibiyay laakiin xilligan wax war ah oo iyaga ku saabsan ma jiraan. Kuwani AirTags waxay isticmaali doonaan qalabka 'U1 chip' ee lagu daray iPhone 11 iyo 11 Pro cusub si loo helo qalab, oo ka saxsan kana badan kan Bluetooth, una oggolaanaya ma aha oo kaliya in la go'aamiyo u dhowaanshaha laakiin sidoo kale booska nala xiriira (bidix, midig, iwm).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » AirTag, tani waxay noqon doontaa magaca qalabka aaladda Apple
Wanaagsan, waan awoodi doonaa inaan ogaado meesha baabuurka xaaskeygu yaallo! LOL
Adeegga muusikada ee qulqulka ee Google YouTube Music ayaa hadda taageera Siri
WatchOS 6 ayaa hadda loo heli karaa Apple Watch Series 1 iyo Series 2